Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mpitondra sainam-pirenena poloney nantsoina hoe “Airline tsara indrindra any Eropa atsinanana”
Nahazo ny anaram-boninahitra “Fiaramanidina tsara indrindra any Eoropa Atsinanana” ny kaompaniam-pirenen'i Polonina, nahatratra ny sasany, Rosiana Aeroflot sy Hongroà Wizzair.
"Ny loka dia manaporofo fa ny LOT Polish Airlines dia kaompaniam-pitaterana mankasitraka sy azo ekena amin'ny tsena iraisam-pirenena" - nanamafy ny LOT Press Office.
Ny gala, nandritra ny sokajy efa ho 70 no nomena loka, natao tany Los Angeles. LOT dia nandrombaka ny anaram-boninahitra "Best Eastern European Line" tamin'ny fanindroany, talohan'ny Aeroflot, Wizzair ary Croatia Airlines. PLL LOT dia nitantana mpandeha 8.8 tapitrisa tamin'ny taona 2018, avo roa heny noho ny tamin'ny 2016. Amin'ny taona 2019, manantena ny hitondra mpandeha 10 tapitrisa ilay kaompaniam-pitaterana. Ny kaomisera poloney koa dia nomena ny sokajy "Ny fifandraisana sidina vaovao tsara indrindra" tamin'ny fandefasana sidina mivantana avy any New York mankany Budapest tamin'ny Mey 2018.
Amin'izao fotoana izao, LOT dia manolotra fifandraisana 107. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2016 dia nanambara ny fisian'ny sidina mivantana 66 ny sidina, anisan'izany ny avy any Warsaw mankany Miami, Los Angeles, Newark, Seoul, Tokyo ary Singapore, avy any Budapest ka hatrany New York sy Chicago, avy any Krakow mankany Chicago ary avy any Rzeszów mankany Newark .